Izinwele ezi-Wavy-Iingcebiso zeenwele zamadoda kunye neeMbono | Amadoda aQinisekileyo
Amadoda amaninzi anamaza endalo ezinweleni zawo, ekwabizwa ngokuba ziinwele zewavy. Olu hlobo lweenwele aluchanekanga kwaye alugobanga, kodwa lilele ndawo phakathi kwezi zimbini.
Ngale ndlela, iinwele ezijijekileyo zinezinto eziluncedo kuzo zombini iinwele ezithe nkqo nezisongekileyo. Iyalawuleka njengeenwele ezithe nkqo (okanye phantse), kodwa amaza ayenza ngakumbi ngathi iinwele ezigobileyo ngokomzimba. Ngesi sizathu Ithathelwa ingqalelo njengohlobo oluhle kakhulu lweenwele, kunye nokulungele nayiphi na inwele.
1 Yintoni amaza kunye nendlela yokuwaphatha
2 Izinwele zeenwele ezi-wavy
2.1 Mfutshane kumacala kwaye ubude phezulu
2.2 Iinwele ezomeleleyo ezinee-bangs
2.3 Izinwele ezi-wavy eziphakathi
Yintoni amaza kunye nendlela yokuwaphatha
Wazi njani ukuba uneenwele ezi-wavy kwaye azithi nkqo okanye zigobileyo? Ukuqonda amaza kulula kakhulu: Olu hlobo lweenwele lumile njenge "S"Ngelixa oligobileyo likhula ngokujikeleza kwaye ethe tye ngokwemvelo ikhula kumgca othe tye.
Ixesha lokomisa ngundoqo xa unamaza. Ukuba iinwele zakho zishinyene kunye ne-wavy, yome ngetawuli okanye isomisi kumandla asezantsi ukuze ivolumu ingaphumi kulawulo. Kwelinye icala, ukuba uneenwele ezintle, isomisi esivuthelayo sinokukunceda ufumane uncedo olongezelelekileyo lwevolumu. Kufuneka kuqatshelwe ukuba amaza sele esenza iinwele ezintle zibonakale zishwabene ngaphandle kwesomisi, nangona kungekho mathandabuzo ukuba ukusetyenziswa koku kuyanceda ukomeleza olu phawu nangakumbi.
Okokugqibela, ukuba unamaza kodwa awachazwanga ngendlela obungathanda ngayo, zininzi iimveliso zamaza kwimarike ezinokukunceda xa unesitayile. I Isiphumo sokutshiza kwi-surf Ziphakathi kweemveliso ezithandwa kakhulu kule njongo. Kwelinye icala, ukuba into oyifunayo kukuyilungisa, eyona isebenzayo sisilungisi seenwele. Kodwa, kuba banokonakalisa iinwele, kuyacetyiswa ukunciphisa ukusetyenziswa kwazo.
Izinwele zeenwele ezi-wavy
Masibone Iingcamango zokucheba iinwele kunye neenwele ze-wavy. Izinketho zesitayile seenwele ezimfutshane kunye neenwele ezinde.
Mfutshane kumacala kwaye ubude phezulu
Los iinwele ezimfutshane emacaleni kwaye zinde ngaphezulu sebenza kakuhle kumadoda aneenwele ezi-wavy. Ziyimfashini ngakumbi kunangaphambili, zombini iinguqulelo ezihlaziyiweyo kunye nesitayile sangaphantsi.
UJamie Dornan unxibe a iinwele ezinomahluko omncinci kakhulu kwimilinganiselo phakathi kwamacala nangaphezulu. Ukuba ufuna le nwele, cela i-barber yakho ukuba iyinqumle ngesikere. Le iinwele ikwavelela ukuzisa zombini ukuthungwa kunye nenkcazo. Ngale ndlela, ukungakuvumeli ukuba kukhule kakhulu phakathi kokusikeka kubalulekile, kunye nokuthintela ukuba iimveliso ziyishiye zinamaqhuma xa usenza isitayile. Okokugqibela, kungumbono ukuqaphela ukuba unentshebe, kuba yenza isibini esihle ngakumbi esineendevu eziphakathi nezide.
URami Malek uphethe iinwele ekufuneka uzithathele ingqalelo ukuba ufuna ukulungela ngaphandle kwentsasa. Umdlali unxiba I-nape kunye namacala amafutshane kakhulu, ngelixa umphezulu ungekho mfutshane kakhulu okanye mde kakhulu: inde ngokwaneleyo ukuba yenze i-toupee yesitayile. Ukunciphisa amaza kwiinwele zakho phezulu kwentloko yakho kuya kukugcina ixesha lokudibanisa iinwele zakho. Ngapha koko, imigca emide eyahlulahlula iya kukunceda ukuba ufuna ukwenza ubuso bakho buvele ixesha elide.
Iinwele ezomeleleyo ezinee-bangs
Enkosi ngevolumu yayo, Iinwele ze-wavy yinto ephambili ekrwada yokwenza zonke iintlobo zee-bangs kunye neetoupe.
Icala le-bangs licebo elihle lokumila iinwele zakho. UPenn Badgley ukhetha i Ukwahlula icala elinesitayile sokwahlukana okuthatha ithuba lomzimba kunye neenwele ezimdaka ezimdaka ze-wavy.
Njengoko uTimothée Chalamet ebonisa, ii-bangs ezivulekileyo zinokuba liqela elikhulu elineenwele ezi-wavy. Ngokudibanisa ne-bangs, amaza athambileyo anceda ekunciphiseni iimpawu ezibukhali kunye ne-angular.
Izinwele ezi-wavy eziphakathi
Mfutshane okanye mde akunamsebenzi, xa uneenwele ezi-wavy ubude beenwele abungomqobo ekufezekiseni istayile kunye nesimbo esiqhelekileyo.
Ukuba uneenwele ezi-wavy, unokufumana isitayile esilinganayo sobude obuphakathi obufana nobomlingisi uJason Momoa. Ngaphandle kwemfuza kunye nolwandle, enye imfihlelo yokuba namaza endalo kukuwashiya kwizixhobo zakho. Ngamanye amaxesha ukufumana iinwele ezintle kulula. Ungasebenzisa iimveliso ukubanika inkcazo, kodwa yidibanise ngezandla zakho ukuze ungabanjwa.
Ukuba ukhetha ukugcina ubude bakho obuphakathi kwe-wavy buphantsi kolawulo, kukho iindlela ezimbalwa ezinokukhawuleza kwaye zisebenze njenge-Samurai hairstyle.. Ukudibanisa iinwele ezinde emva koxinzelelo kunenye inzuzo: kuyanceda ukukhulisa imigca yobuso bakho, kunye nokunceda iinwele zakho zidibane ngcono neempahla ezithile, ngakumbi ezisesikweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Isitayile esinenwele » Iinwele ezibhabhazelayo
Ngaba utywala buyakutyeba?